China Framming ifektri nabaphakeli | Isi-Donghua
I-Acrylic ithole ukuthandwa ngaphezu kwengilazi yokwakheka eminyakeni yamuva ngesizathu esizwakalayo.
● Iyabhidlika futhi ayisindi, ngokungafani nengilazi. Lesi sici senza i-acrylic ikhetheke kubathwebuli bezithombe abasebenza nezingane nemindeni - ikakhulukazi izingane. Ukulengisa ifreyimu ngephaneli le-acrylic enkulisa noma egumbini lokudlala kuphephe kakhulu kunokunye okuhlukile kwengilazi, ngoba mancane amathuba okuthi kulimaze noma ngubani uma iwa.
● Ngokwengeziwe, isimo shatterproof nesingasindi senza i-acrylic ikulungele ukuthunyelwa. Sincoma ifreyimu yangokwezifiso yama-acrylic embukisweni omuhle wobuciko ngoba ingu-1/2 isisindo sengilazi futhi ayinakuqhekeka. Ukwenza kube lula futhi kuphephe ukuthutha nokuthumela ubuciko bemibukiso.
● Ihlala isikhathi eside. Ngeke kubangele ukuthi ifreyimu ikhothame ngokuhamba kwesikhathi. Ngakho-ke yinto ekhethwayo lapho ulenga ubuciko obukhulu kanye nokugcinwa.
Sula i-acrylic iyindlela ejwayelekile kakhulu yezinhlelo zokusebenza zansuku zonke zokwenza ifreyimu. Kubiza kakhulu emndenini we-acrylic, futhi kuzokunikeza amandla afinyelela ku-92% wesithombe esicacile.